IATA: Kuomarara zvakanyanya munzira iyo miganhu iri kuvhurazve
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » IATA: Kuomarara zvakanyanya munzira iyo miganhu iri kuvhurazve
Zvepasi rose uye zvepamba zvinorambidzwa zvakaomarara uye zvinokanganisa webhu yemitemo ine zvishoma kushomeka pakati pavo.
Kurambidzwa kwekufamba kwakatengera hurumende nguva yekupindura mumazuva ekutanga e COVID-19 denda.
Mumwedzi yekupedzisira, misika yakakosha yakati wandei yakambovharwa yakatora matanho ekuvhura vafambi vanodzivirirwa.
Pakati pemisika yakanga yambovharwa, Europe yaive yekutanga kufamba, ichiteverwa neCanada, UK, US neSingapore.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) inodaidzira kuguma kweasingaenderane COVID-19 mafambiro ekufamba ayo ari kumisa kudzoka kwekufambisa kwemhepo. Yakurudzira hurumende kuti dziite hutongi hwakareruka kugadzirisa njodzi dze COVID-19 sezvo miganho yakavhurwa pakufamba kwenyika dzese.
“Kurambidzwa kwekufamba kwakatengera hurumende nguva yekupindura mumazuva ekutanga echirwere ichi. Anenge makore maviri gare gare, iwo mufungo hausipo. COVID-19 iripo mumativi ese epasi. Kurambidzwa kwekufamba kwakaoma uye kunovhiringidza webhu yemitemo ine kushomeka kushoma pakati pavo. Uye pane humbowo hushoma hwekutsigira zvirambidzo zvemuganho zvinokonzeresa nekukanganisa kwehupfumi kwavanogadzira, "akadaro Willie Walsh, Director General weIATA.
Miedzo yekuyedza yevanosvika UK vanoratidza kuti vafambi havazi kuwedzera njodzi kune vagari vemo. “Pane mamirioni matatu anosvika pakati paKukadzi naAugust 42,000 chete vakaongororwa utachiona — kana kuti vari pasi pe250 pazuva. Zvichakadaro, iyo yezuva nezuva kesi kuverenga muUK ndeye 35,000 uye hupfumi - kunze kwekufamba kwenyika - yakavhurika. Vanhu vanofanira kungosunungukawo kufamba, ”akadaro Walsh.
Mumwedzi yekupedzisira, misika yakakosha yakati wandei yakambovharwa yakatora matanho ekuvhura vafambi vanodzivirirwa. Pakati pemisika yakanga yambovharwa, Europe yaive yekutanga kufamba, ichiteverwa neCanada, UK, US neSingapore. Kunyangwe Australia, iyo iine zvimwe zvinorambidzwa zvakanyanya, iri kutora matanho ekuvhurazve miganhu yayo kune vaccinic vafambi munaNovember.
Iată inotsigira mafambiro aya uye inokurudzira hurumende dzese kuti dzione danho rinotevera rekuvhura zvekare miganho:
Mishonga yekudzivirira zvirwere inofanirwa kuwanikwa kune vese nekukurumidza sezvazvinogona.